1 Samuel 1 AKCB - 撒母耳记上 1 CCB
1Na ɔbarima bi fi Ramataim-Sofim a ɛwɔ Efraim bepɔw asase so a ne din de Elkana. Na Elkana yi yɛ Yeroham babarima ne Elihu nena nso. Na wofi Tohu fi, a ɛwɔ Suf abusua mu. 2Na Elkana wɔ yerenom baanu. Na wɔn din de Hana ne Penina. Na Penina wɔ mma. Hana de, na onni ba.
3Afe biara, na Elkana ne nʼabusuafo kɔ Silo kɔsom, bɔ afɔre ma Asafo Awurade wɔ Awurade fi. Na Eli mmabarima baanu a wɔn din de Hofni ne Pinehas na wɔyɛ Awurade asɔfo wɔ hɔ saa bere no. 4Da biara a Elkana bɛba abɛbɔ afɔre no, ɔde nam no mu nkyɛmu bi ma ne yere Penina ne ne mma no mu biara. 5Nanso Hana de, na ne kyɛfa yɛ sononko, efisɛ na ɔdɔ no yiye. 6Nanso na Awurade ato nʼawode mu nti, na Penina di ne ho fɛw. 7Na saa asɛm yi kɔɔ so afe biara. Bere biara a wɔbɛkɔ Awurade fi no, Penina bɔ Hana akutia. Na eyi ma Hana su na onnidi mpo. 8Ɛba saa a, ne kunu Elkana bisa no se, “Hana, adɛn na woresu? Adɛn nti na wunnidi? Adɛn nti na wo werɛ ahow? So mensom bo mma wo nsen sɛ anka wowɔ mmabarima du mpo?”
Hana Bɔ Mpae Sɛ Ɔpɛ Ɔba
9Da koro bi a na wɔwɔ Silo no, Hana fii adi anwummere bi a wɔadidi awie sɛ ɔrekɔ Awurade fi akɔbɔ mpae. Na ɔsɔfo Eli te baabi a ɔtena daa wɔ Awurade fi pon ano hɔ. 10Hana fi awerɛhow a ano yɛ den mu sui, bere a na ɔrebɔ Awurade mpae. 11Na ɔhyɛɛ bɔ se, “Ao Asafo Awurade, sɛ wobɛhwɛ wo somfo awerɛhowdi so, na woatie me mpaebɔ ama me ɔbabarima a, ɛno de mede no bɛsan ama wo. Ne nna a obedi nyinaa ɔbɛyɛ wo de. Nea ɛbɛyɛ adansedi sɛ wɔde no ama Awurade ne sɛ wɔremfa oyiwan nka ne ti da.”
12Ogu so rebɔ mpae no, na Eli hwɛ no. 13Ohuu sɛ ɔrebesebese nʼano, nanso ɔnte nne biara no, Eli susuw sɛ wanom nsa. 14Obisaa no se, “Ɛsɛ sɛ woba ha bere a woabow nsa ana? Ma wʼani nna hɔ!”
15Na Hana buae se, “Dabi, me wura, memmow nsa, na mmom, me werɛ na ahow nti na mereka mʼahiasɛm akyerɛ Awurade. 16Mesrɛ wo, mfa no sɛ meyɛ ɔbea omumɔyɛfo. Na anibere ne awerɛhow so na merebɔ mpae.”
17Eli buae se, “Fa asomdwoe kɔ! Israel Nyankopɔn nyɛ wʼabisade mma wo.”
18Hana teɛ mu se, “Ma wʼafenaa nya wʼanim anuonyam a, awura” Ɔsan kɔ kodidii, na wanni awerɛhow bio.
Wɔwo Samuel De No Ma Onyankopɔn
19Ade kyee anɔpahema no, ofi no mu nnipa sɔre kɔsom Awurade bio. Afei, wɔsan kɔɔ Rama. Bere a Elkana de ne ho kaa Hana no, Awurade kaee Hana adebisa no, 20na anni da bi, ɔwoo ɔbabarima. Ɔtoo no din Samuel na ɔkae se, “Mibisaa no fii Awurade nkyɛn.”
21Afe akyi no, Elkana, Penina, ne wɔn mma kɔɔ sɛ wɔrekɔbɔ afirihyia afɔre ama Awurade. 22Hana ankɔ bi. Ɔka kyerɛɛ ne kunu se, “Sɛ abofra no twa nufu a, mede no bɛkɔ Awurade fi na makogyaw no wɔ hɔ ama Awurade afebɔɔ.”
23Elkana kae se, “Nea wugye di sɛ eye ma wo biara no, yɛ. Tena ha ansa; na Awurade mmoa wo mma wunni wo bɔhyɛ so.” Enti ɔbea no tenaa fie hwɛɛ ne babarima no.
24Otwaa no nufu wiei no, ɔde no kɔɔ Awurade asɔre fi wɔ Silo. Wɔde nantwinini a wadi mfe abiɛsa ne esiam lita dunsia ne bobesa kakra bae. 25Wɔde nantwinini no bɔɔ afɔre wiee no, wɔde abofra no brɛɛ Eli. 26Hana kae se, “Owura mesrɛ wo. Sɛ wote ase yi, mene ɔbea a obegyinaa wo ho bɔɔ Awurade mpae no. 27Mebɔɔ saa abofra yi ho mpae, na Awurade ayɛ mʼabisade ama me. 28Enti mprempren, mede abofra yi rema Awurade. Ne nkwa nna nyinaa, ɔbɛyɛ Awurade dea.” Na ɔsom Awurade wɔ hɔ.
AKCB : 1 Samuel 1
3以利加拿每年都从家乡到示罗去敬拜万军之耶和华，献上祭物。当时以利的两个儿子何弗尼和非尼哈在那里做耶和华的祭司。 4每当献完祭后，以利加拿就会把祭肉分给毗尼娜和她的儿女。 5但他会给哈娜双份祭肉，因为他爱哈娜，虽然耶和华使她不能生育。 6毗尼娜见她不能生育，便常常羞辱她、气她。 7每年来到耶和华的殿时，毗尼娜总是惹她伤心哭泣，以致她吃不下饭。 8她的丈夫以利加拿对她说：“哈娜，你为什么哭？为什么不吃饭？为什么心里难过？有我不是比有十个儿子更好吗？”
9一天，他们在示罗吃完饭后，哈娜起来祷告。当时，祭司以利正坐在耶和华殿门口的座位上。 10哈娜心中愁苦，一边祷告一边伤心地哭泣。 11她向上帝许愿说：“万军之耶和华啊，如果你眷顾婢女的痛苦，不忘记婢女，赐给婢女一个儿子，我必让他终生事奉你，永不剃他的头1:11 参见民数记6章。。” 12哈娜在耶和华面前祷告，以利注视着她的嘴唇。 13哈娜在心中默祷，只动嘴唇，不出声音，以利以为她喝醉了， 14便对她说：“你要醉到什么时候呢？醒醒酒吧！” 15哈娜答道：“我主啊，我没有喝醉，我淡酒和烈酒都没有喝。我是心里非常愁苦，在耶和华面前倾诉心事。 16请不要以为我是堕落的女人，我心中非常悲伤痛苦，所以一直在祷告。” 17以利说：“你安心地回去吧，愿以色列的上帝答应你的祈求。” 18哈娜说：“谢谢你恩待婢女。”于是，她就去吃饭，不再愁容满面了。
21第二年，以利加拿带全家人前往示罗，向耶和华献年祭并还所许的愿。 22哈娜没有跟他们同去，她告诉丈夫说：“孩子断奶以后，我会把他带去献给耶和华，让他永远住在那里。” 23以利加拿说：“就依你的意思吧。愿耶和华成就祂的应许。”于是，她就留在家中哺养孩子，直到孩子断奶。 24孩子断奶以后，她就把他带到示罗耶和华的殿，并带去三头公牛、十公斤面粉和一袋酒。 25他们宰了一头公牛后，就把孩子带到以利面前。 26哈娜说：“我主啊，我敢在你面前起誓，我就是那一次站在你这里向耶和华祈求的妇人。 27我求耶和华赐给我一个孩子，祂应允了我的祈求。 28现在，我将他献给耶和华，让他终身事奉耶和华。”
CCB : 撒母耳记上 1